Otu esi etinye Brave Browser Stable, Beta, ma ọ bụ abalị na Rocky Linux 8 - LinuxCapable
Otu esi etinye Brave Browser Stable, Beta, ma ọ bụ abalị na Rocky Linux 8
October 30, 2021 August 12, 2021 by Jọshụa James
Bubata & Wụnye igodo GPG na ebe nchekwa
Nhọrọ - Bubata Beta, igodo GPG abalị na ebe nchekwa
Wụnye Brave Browser
Nhọrọ. Wụnye Brave Browser Beta ma ọ bụ abalị
Otu esi ebido Brave Browser
Otu esi emelite ihe nchọgharị Brave
Otu esi ewepu (wepụ) ihe nchọgharị obi ike
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta Otu esi etinye Brave na Rocky Linux 8.
Tupu ịga n'ihu na ntinye nke Brave Browser, gbaa iwu a ka ịwụnye ma ọ bụ lelee na ngwugwu dnf-plugins-core arụnyere na desktọpụ Linux Rocky gị.
Maka sistemụ dabere na Linux Rocky, ngalaba nchekwa atọ ugbu a kwesịrị ibubata n'otu n'otu na sistemụ gị. Ozugbo emechara, a na-agbakwunye ha na-akpaghị aka na repolist gị, yabụ na ịgaghị achọ ibudata ndị a ọzọ iji melite Brave n'ọdịniihu.
Ịbubata Brave Browser Ebe nchekwa kwụsiri ike & igodo GPG (A kwadoro):
Ịbubata Brave Browser Ebe nchekwa beta & igodo GPG:
Ịbubata Brave Browser Mwube abalị & igodo GPG:
Na-esote, nyochaa nrụpụta na ụdị arụnyere. Nke a gosikwara na arụnyere Brave nke ọma.
N'aka nke ọzọ, ịnwere ike ịwụnye Brave Beta ma ọ bụ arụ ọrụ abalị ma ọ bụrụ na ị budatala ebe nchekwa. A naghị atụ aro ụdị abụọ a kwa ụbọchị, ọkachasị ọ bụghị na desktọpụ isi ma ọ bụ ihe nkesa mmepụta. Otú ọ dị, maka ndị chọrọ ibi na nsọtụ, ị nwere ike ịwụnye nsụgharị ndị ọzọ.
Ka ịwụnye Brave Browser beta:
Ka ịwụnye Brave Browser wuo abalị (Dev):
Iji nyochaa Beta Brave Browser:
Iji nyochaa Brave Browser kwa abalị:
Iji gosi na nrụnye Brave gbakwunyere ebe nchekwa nke ọma na ndepụta nchekwa gị na Rocky Linux. Biko mee ihe ndị a dnf repolist iwu iji hụ na agbakwunyere na arụ ọrụ.
Dị ka n'elu mmepụta si dnf repolist iwu, etinyela ebe nchekwa atọ niile nke ọma. Cheta, beta na abalị bụ nhọrọ, na ọtụtụ ndị ọrụ agaghị achọ ụdịdị ndị a.
Na echichi zuru ezu, ị nwere ike na-agba ọsọ obi ike na a ole na ole ụzọ dị iche iche. Nke mbụ, mgbe ịnọ na ọdụ gị, jiri iwu a:
Agbanyeghị, nke a abụghị ihe bara uru, ma ị ga-eji ụzọ a na desktọpụ gị mepee ụzọ ahụ: Ihe omume > Gosi ngwa > Ihe nchọgharị webụ nwere obi ike. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịhụ ya, jiri ọrụ ọchụchọ dị na menu Gosi Ngwa ma ọ bụrụ na etinyere ọtụtụ ngwa.
The oge mbụ ị mepee Brave na Rocky Linux 8, mmapụta ndị a ga-ekele gị:
Ka imelite Brave, gbanye iwu mmelite DNF na ọdụ gị ka ị ga-elele sistemụ gị niile maka mmelite ọ bụla.
Iji kwalite ihe nchọgharị Brave n'onwe ya, jiri aha ngwugwu mee iwu nkwalite ahụ.
tinye "-beta" or "-abali" na njedebe ma ọ bụrụ na ị wụnye ụdị ihe nchọgharị ndị ọzọ.
Iji wepu Brave, mebie iwu njedebe ndị a:
Iji wepu Beta Brave Browser:
Iji wepu Brave Browser Nightly Build:
N'ime nkuzi a, ị mụtala otu esi ebubata ngwungwu ọnụọgụ abụọ RPM yana igodo GPG iji wụnye ụdị kwụsiri ike ọhụrụ Brave Browser. N'ozuzu, Brave bụ onye ọhụrụ na-akpali mmasị na ebe ihe nchọgharị weebụ. A ga-ekwere nkwudo Brave banyere ịdị ngwa karịa Google Chrome dịka site na iwepu mgbasa ozi na ndị na-eso ụzọ mgbasa ozi na ndabara, Brave na-ebudata ọdịnaya dị obere na weebụsaịtị karịa ihe nchọgharị ọ bụla ọzọ.
Categories Nkume linux Tags Nchọgharị Obi Ike, Nkume linux Mail igodo
Otu esi etinye Java 16 (OpenJDK 16) na Rocky Linux 8